ကုလားတန်စီမံကိန်း ကုန်တင်ရေယာဉ်တွေ တိုက်ခိုက်ခံရ
วันอาทิตย์ ที่ 24 ม.ค. 2564
2 ธ.ค. 2562 - 17:36 น.
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းမှာ တည်ဆောက်နေတဲ့ ကုလားတန်မြစ်ကူးတံတားစီမံကိန်းအတွက် စက်ယန္တရားတွေနဲ့ တံတားတည်ဆောက်ရေးအတွက် အသုံးပြုမယ့် ပစ္စည်းတွေကိုသယ်လာတဲ့ ကုန်တင် ရေယာဉ် ၆ စီးကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေဘက်ကနေပြီးတော့ လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဲ့ဒီရေယာဉ်တွေ ကျောက်တော်မြို့အထက်ဘက် တင်းမကျေးရွာအနီးကိုအရောက်မှာ ကျေးရွာအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရေယာဉ်နဲ့ စက်ယန္တရားတချို့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အဲ့ဒီရေယာဉ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး ရေယာဉ်ဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်ဘက်က ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တပ်မတော်အနေနဲ့ ကုလားတန်စီမံကိန်းကို စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အမြတ်ထုတ်နေတာကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ အခုလည်း ရန်ကုန်ကနေ သယ်ယူလာခဲ့တဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို ကုလားတန်စီမံကိန်းအတွင်းက သင်္ဘောတွေနဲ့ ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခကပြောပါတယ်။
ကုလားတန်စီမံကိန်းအပေါ် အေအေတပ်ဖွဲ့ရဲ့ သဘောထား
ရှပ်ပြေးယာဉ်ပေါ်က ဖမ်းသွားသူတွေထဲမှာ တပ် အရာရှိတွေပါ လို့ အေအေ ပြော
"တကယ်တော့ အဲ့ဒီမှာ ကုလားတန်ပရောဂျက်အတွက် ပစ္စည်းက မဆိုစလောက်လေးပဲ ပါကောင်းပါမယ်။ အများစုကတော့ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။ စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ စစ်ဆင်ရေးပုံစံမျိုးနဲ့ ချီတက်လာတဲ့ ရေတပ်သင်္ဘောတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ပစ်ခတ်တားဆီးရမှာပဲ။ အဲ့ဒီနေ့ကလည်းပဲ ရှေ့ပွိုင့်သင်္ဘောနှစ်စီးလာတယ်။ အမြန်တိုက်ခိုက်ရေးရေယာဉ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာမှ ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် သုံးစီးပါတယ်။ ပြီးမှ အဲဒီနောက်မှာ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ၊ ရိက္ခာတွေအဲ့လိုပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့ သင်္ဘောသုံးစီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ ရပ်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေ လုပ်မှာပဲ"လို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
ပလက်ဝတံတားဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကုလားတန်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ တံတားတစ်စင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယနယ်စပ်ဒေသကို ကုန်းလမ်းဖောက်ဆက်သွယ်မှုရဲ့ အဓိကတံတားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက် အမှန်တကယ် ပစ္စည်းတွေသယ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် သူတို့ကိုအကြောင်းကြားပြီးမှ သွားလာဖို့နဲ့ ဘယ်လုံခြုံရေးကိုမှ အသုံးပြုစရာမလိုကြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို အသိပေးထားကြောင်းနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ဖုန်းနံပတ်တွေကိုလည်း ပေးထားတယ်လို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွှေမင်းသမီး ကုန်တင်ရေယာဉ်က ရေယာဉ်လုပ်သားတွေကို ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီး နောက်နောင် သွားလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေကို သူတို့သဘောပေါက်အောင် ပြောဆိုပြီး ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းနဲ့ တယ်လီဖုန်းတွေနဲ့ ငွေသားပစ္စည်းတွေကို သိမ်းယူထားလိုက်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ဘူးလို့ ခိုင်သုခက တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
အေအေ အဖွဲ့ ဖမ်းစဉ် သေဆုံးသူ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ရုပ်အလောင်း အိန္ဒိယ ကို ပြန်သယ် ဖို့စီစဉ်နေ
လက်ရှိမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသနဲ့ ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ အေအေ ရက္ခိုင့်တပ်တော်တို့အကြား တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်သလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလအတွင်းက အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွေအတွင်းကို ဖြတ်သန်းထားတဲ့ ကုလားတန်မြစ်အတွင်းမှာ အခုလိုမျိုး ကုန်သင်္ဘောတွေ မကြာခဏဆိုသလို တိုက်ခိုက်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကတစ်ကြိမ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်၊ အခု နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ် တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီရေယာဉ်တွေဟာ ကုလားတန်မြစ်ကူးတံတားကိုအကြောင်းပြပြီး စစ်လက်နက်တွေနဲ့ စစ်သည်တွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ ရေယာဉ်တွေအဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်ရတာလို့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်ဘက်နေ ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာ အမှန်တကယ် ပလက်ဝတံတားအတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို သယ်ဆောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင် သူတို့အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး တိုက်ခိုက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိကြောင်းနဲ့ အဲ့ဒီစီမံကိန်းအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ဘယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးကိုမှ အေအေအနေနဲ့ ကန့်ကွက်နှောင့်ယှက်နေစရာအ ကြောင်းမရှိဘူးလို့ အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရ ခိုင်သုခက ဘီဘီစီကိုပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းနဲ့ ဒီဇင်ဘာတစ်ရက်နေ့တွေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မြို့နယ်အများစုတို့မှာ တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့သလို အရပ်သားထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
กรมบัญชีกลาง แจงแล้ว หลังยายวัย 89 ถูกเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนกว่า 8 หมื่นบาท
เกษตรกรน้ำตานอง! สูญกว่า 15 ล้าน ปลากดคังลอยตายกว่า 100 ตัน
ลูกศิษย์อาลัย! หลวงปู่ประยงค์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 95 ปี
ชาวบ้านร้อง! วอนย้ายเสาสัญญาณโทรศัพท์ หลังทำสาวแท้งลูก5ราย
ไอจีแตก! แอฟ ทักษอร เผยลุกส์หวานซ่อนเปรี้ยว ทิ้งแคปชั่นชวนอึ้ง อยากหายเหงา
หนุ่มปืนโหด รัวดับ2กลาง บขส.ภูเก็ต มือปืนเปิดปาก เผยนาทีระทึก
ให้ไวเลย! แบงก์ออมสิน เปิดลงทะเบียน 'กู้ฉุกเฉิน' ผ่านแอพแค่เที่ยงเท่านั้น
หลงเชื่อใจ! รู้จักผ่านแอพหาคู่ สาวสะบักสะบอม หนุ่มซ้อมเข้า รพ. ล่าสุดหนักกว่าเดิม
อั้ม โดนอวตารคอมเมนต์แซะ ผิดหวัง เจอตัวจริงไม่เหมือนในรูป-แฟนคลับซัดกลับเดือด
อัลบั้มภาพ ကုလားတန်စီမံကိန်း ကုန်တင်ရေယာဉ်တွေ တိုက်ခိုက်ခံရ